FBC - Faayidaa Kitaaba dubbisuu!
Faayidaa Kitaaba dubbisuu!
Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 (FBC) Waa dubbisuun faayidaa baay’ee qaba; kanneen keessaa muraasni akka asiin gaddiitti dhihaataniiru:
Waa dubbisuun sammuu keenyaaf ispoortiidha. Umriin dabaluu wajjiin rakkoo waa dagachuu nutti dhufuu malu "Alzheimer's disease & dementia" kanneen jedhaman nurraa ittisa.
2.Sammuudhaan dhiphachuu ni too’ata
Hangam kamiyyuu wanti nu dhiphise yoo jiraatellee ; kitaaba jaallannu kan miira keenya guutuudhan dubbisuu dandeenyu- asoosama ta'uu danda'a- daqiiqaa muraasaaf yoo dubbisne sammuun keenya nifurama; sana booda dhimmi u dhiphises salphatee nutti mula'achuu danda'a ykn furmaanni nuuf ifa ta'a.
3.Beekumsatu irraa argama
Yogguu dubbisnu odeeffannoo haraa sammuu keenya soorra. Odeeffannoon kunneen beekumsa nuuf ta'a; dhimma kamirratu mormuu fi amansiisuuf odeeffannoo qabatamaa dhiheessuu dandeenya. Beekkumsi horanne rakkoo jireenya dhuunfaa keenyaa fi kan hiriyaa keenyaa darbees kan hawaasa bal'aa furuuf nudandeessisa. Nama biratis dhageettii fi kabajaa horanna.
4. Jechoota haaraa barra
Kitaaba yogguu dubbisnu jechoota haaraa barra; kun ammoo afaan tokko sirritti dubbachuu, dhagahuu fi barreessuu akka dandeenyu nu gargaara. Nama waliinis waliigaluun nuuf salphata. Gaaffilee afaanii qorumsa irrati nu muudatus sirriitti deebisuu dandeenya.
5.Dandeettii waa yaadachuu fooyyessa
Barreeffama bareedaa yogguu dubbisne sirni dhaamsa deeddebisuu sammuu keenya keessati argamu ni si'ooma kun ammoo dandeettii waa yaadachuu sammuu foyyessa.
6.Dandeettii kalaqa sammuu dabala
Namni waa dubbisu haalli itti addunyaa kana ilaalu namoota waa hin-dubbisneen gargari. Namni waa dubbisu rakkoo dhuunfaa isaas haa ta'u kan rakkoo hawaasa isaa keessa jiru xiinxalee adda baasa ;xiinxalee furmata itti barbaada.
7. Xiyyeeffannaa Sammuu dabala
Yeroo ammaa kana yaadni Keenya bakka meeqati faca'eeti oola. Maarree daqiiqaa muraasaaf barruu tokko dubbisuun yaada keenya sassabachuu nu dandeessisa.
8.Dandeettii waa katabuu dabala
Kitaabbilee garagaraa dubbisuun jechoota haaraa baruuf,,sirna barreeffama baruuf fi yaada keenya barreeffamaan ibsuu akka dandeenyu nu gargaara.
9.Tasgabbii akka horannuuf
Madda: Doktar Yoonaa
Oduuwwan Biroo « Timaatima nyaachuun kaansarii mar’ummaanii ittisa: qorannoo	Qabiyyee haannan harmaa keessa jiruu fi humna kaansarii ittisuu isaa… »